श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् , त्यसैले एक्लै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउने ? | Rajmarga
श्रीमान्–श्रीमती सधैँ सँगै नहुन सक्छन् , त्यसैले एक्लै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउने ?
तर स्वास्थ्य र यौन सन्तुष्टिका हिसाबले यौन खेलौना स्वस्थ अभ्यास भने हैन । प्राकृतिक रुपमा (यौन जोडीसँग) यौन सम्पर्क गर्दा योनिबाट योनि रसायन निस्कन्छ । त्यसैले यौनानन्द तथा यौन सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । सेक्स टोयको प्रयोग गर्दा केही समय आनन्दको अनुभव हुनसक्ला तर यो भरपर्दो हुन सक्दैन । शारीरिक रुपमा यौन सम्पर्क गर्दा शारीरिक मात्रै हैन एकअर्काबीच भावनासमेत साटासाट हुन्छ । प्राकृतिक सहवासमा शरीरसँगै भावना समेत मिसिन्छ ।शरीरसँगै मानसिक रुपमा समेत आनन्द पाउन सकिन्छ ।
सेक्स टोयको प्रयोगले शारीरिक सन्तुष्टि त पाउन सकिएला तर मानसिक सन्तुष्टि सम्भव हुन्न । यसले क्षणिक रुपमा शारीरिक आवश्यकता पूरा हुन्छ तर दीर्घकालमा मानसिक रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यौन जीवनमा सकेसम्म प्राकृतिक प्रक्रिया नै अपनाउनु पर्छ । प्राकृतिक प्रक्रिया नै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । शुक्रवार साप्ताहिकबाट
Previous post: विश्व शारीरिक सुगठनमा महर्जनलाई स्वर्ण
Next post: करेन्ट लागेर विद्युत् कर्मचारीको मृत्यु